“Neymar Jr wuxuu ka fiican yahay xitaa Lionel Messi” – Halyey hore xulka qaranka Brazil ah – Gool FM
(Yurub) 25 Mar 2020. Xiddigaha Neymar Jr iyo Lionel Messi ayaa waxay si wadajir ah ugu soo ciyaareen kooxda kubadda cagta ee Barcelona, waxayna si wadajir ah ugu guuleysteen inay sameeyaan weerar dab ah marka lagu daro xiddiga reer Uruguay Luis Suarez.
Halyeeyga xulka qaranka Brazil ee Cafu ayaa sheegay inuusan jirin cid ka fiican xiddiga ay isku wadanka yihiin iyo kooxda Paris St Germain ee Neymar Jr marka loo fiiriyo awoodiisa farsamo, xitaa Lionel Messi.
Laakiin Neymar ayaa go’aansaday inuu ka tago Barcelona xagaagii 2017, si uu ugu biiro Paris Saint-Germain, haatana xiddiga reer Brazil ayaa isku dayaya inuu ku laabto gurigiisii ​​hore ee Barca.
Haddaba halyeeyga xulka qaranka Brazil ee Cafu ayaa wareysi uu ku bixiyay “Fox Sports” wuxuu ku sheegay:
“Ma jiro ciyaaryahan ka sareeya Neymar Jr marka loo eego awoodiisa farsamada, xitaa Lionel Messi”.
“Waxa adduunka doonayo ayaa ah in la daawado Neymar Jr oo ciyaara kubadda cagta, kaasoo naftiisa u huray kubbadda cagta.”
“Neymar Jr oo u ciyaaraya xulka qaranka? Marka uu si fiican u ciyaarayo, Brazil si fiican ayey u ciyaareysaa, waa ciyaaryahan u jooga mar walba inuu isbadel ka sameeyo xulka qaranka Brazil”.
“Waxaa la joogaa waqtigii Kubadda Cagta, haatan wuxuu astaan u yahay Paris Saint-Germain, waana ciyaaryahanka ugu qaalisan adduunka.”